Sina Mahomby sy matsiro enamel mandefa vy lafaoro fanamboarana orinasa sy orinasa | SANXIA
Lafaoro vy mahomby sy matsiro enamel
Famaritana:Φ305 * 90mm
lanja:6.3kg eo ho eo
loko:Pink, maintso, volomboasary, manga, volomparasy sy maro hafa, arakaraka ny filanao rehetra
Ny vilany enamel no be mpampiasa indrindra amin'ny fandrahoan-tsakafo ao an-trano, satria izy io dia miteraka hafanana sy fitehirizana hafanana tena tsara. Haingam-pandeha ny fitehirizana sakafo, izay mety hampitombo ny fahaizanao mahandro.
Ny vy namboarina dia azo ampiasaina amin'ny saika fandrahoana rehetra, ao anatin'izany ny fatana fampidirana, herinaratra, gazy ary seramika. Azo ampiasaina amin'ny lafaoro mihitsy aza, hatramin'ny 500 degre!
Ny vy vita amin'ny enamel dia manana endrika tsy manjavozavo, tsy lafarinina tonga lafatra ho an'ny fikolokoloana, fikosehana, fikolokoloana, fikolokoloana, fanaovana mofo ary maro hafa! Ny fampiasana ny toerana misy hafanana ambany dia hisorohana ny fijanonan'ny sakafo. Ny kojakoja metaly dia afaka manapotipotika ny famaranana porcelain, noho izany ampiasao fitaovana vita amin'ny hazo, silicone na nylon.
Mamirapiratra vita amin'ny porselana, mifamatotra amin'ny vy mihantona, mamorona lakozia vita amin'ny enamel tsara tarehy! Izany dia miteraka ny tombony rehetra azo avy amin'ny vy, toy ny fihazonana hafanana ambony ary na ny fizarana hafanana aza, raha tsy misy ny fihenan-tsakafo. Ny vy nopetahana enamel dia tsy mitaky zava-manitra, ary mahatohitra ny sakafo misy asidra sy alkaly. Ny loko ivelany mamirapiratra sy ny atitany mainty dia manome loko falifaly ao an-dakozia!
ny tahony ergonomika dia manamora ny fivezivezena na hampiakarana ny lapoaly. Mampiasaha mitts na fatana lafaoro foana rehefa mikarakara lapoaly; Ampiasao ny sarom-bilany hamandoana sy hitahiry sakafo ary koa ho an'ny fikolokoloana, fanaovan-tsakafo, fikororohana ary fanaovana koba! Ity lalina ity dia lalina kokoa noho ny casserole marivo.
Voaro amin'ny fanasana vilia ny vy natsipy vy, fa tsy tokony hasaina handro tanana mba hitazomana ny farany vita amin'ny glossy. Sasao amin'ny tanana mafana amin'ny rano mafana sy detergent malefaka.
Anjaranao ny misafidy na manamboatra azy ny lokon'ny vokatra. Ny kalitaon'ny vokatra dia hojeren'ny Sanxia. Ny sofina, rindrina ary loko amin'ny vilany dia hiantoka fa tsy misy lesoka amin'ny lafiny rehetra. Mampahery ny andinindininy. Mazava ho azy, ankoatry ny fisavana ny fisehoana dia hampiharina amin'ny fomba hentitra ihany koa ny fizahana matihanina ny vokatra. Ny kalitaon'ny vokatra ihany koa no tena atahoranay.
Teo aloha: Vilany lasopy enamel an-trano 24cm non stick enamel cast iron iron stewing pot
Manaraka: Enamel tsy misy kalitao avo lenta vy fanendasana vilany steak
ncoated Cast Iron Skillet, xtreme Iron Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, Cast Iron Skillet, namel Skillet, t stainless Cast Iron Skillet,